Rooting Android waa hab in ay helaan mudnaan ay si buuxda u xakameeyo nidaamka qalliinka Android. Marka qaadan helaan xididka, ayaad ugu uninstall karaan barnaamijyadooda preinstalled iyo nidaamka si degdeg ah u ordaan, cusboonaynta in Android version dambeeyay, rakibi barnaamijyadooda u baahan in ay helaan xididka, iyo in ka badan. Iyada oo faa'iidooyin badan oo u soo Bixiyaa, waa in aad la yaabanahay sida ay u wada rujin telefoonka Android ama kiniin. Maanta, ee qodobkan, waxaan doonayaa inaan kuu sheego hab sahlan oo ka rujin phone Android ama kiniin.
Qaybta 1. Bareebka Work ka hor soo afjarno Android Phone ama Tablet
Qaybta 2. 1 Click to Root Android Phone // Tablet ka Computer la MobileGo
Qaybta 3. Root Android Tablet / Phone by hanad Isticmaalka Root
Qaybta 4. khasaare Data ka dib soo afjarno? Waxaa dayactir
Qaybta 5. Poll: Ma waxa aad maamuli in ay xididka Phone Your Android ama Tablet
1. Ka dhig gurmad ah Full u Phone Your Android ama Tablet
Qofna ayaa xaqiijiyay in rooting Android gabi ahaanba waa ammaan iyo sameecadda ah. Si looga fogaado kara wax khasaaro xogta, waa lagama maarmaan in ay gurmad aad telefoon Android ama kiniin ah ka hor soo afjarno android.
2. Phone Your Android ama Tablet si buuxda u soo oogay
Ma aqaan in aad wakhti intee le'eg ayay qaadan doontaa inay ku dhameystaan ​​habka xididka. Haddii aad telefoonka Android ama kiniin egyahay batari inta lagu jiro rooting ah, waxay noqon karaan leben ah. Sidaas darteed, si loo hubiyo in awoodii u telefoonka Android ama kiniin ah in la buuxda lagu eedeeyay.
3. Raadi habboon Root Tool
Ma uusan qalab xidid shuqul kasta oo aad u. Qalabka xidid qaarkood waxa keliya oo la heli karo koobnayn telefoonada Android iyo kiniiniyada. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aad si aad u hesho qalab ku haboon xidid kaas oo hubiya in aad telefoon ama Android kiniin waxaa lagu taageeray. In this article, Waxaan ku talinaynaa in laba qalab rooting waxtar leh, Wondershare MobileGo iyo Root hanad .
4. Watch Videos ku saabsan soo afjarno
Waxaa tahay badan YouTube videos u sheegaya sida loo rujin telefoonka ama kiniin tallaabo Android talaabo aad. Daawo nooc kasta oo kale ee videos, oo idinkuna waxaad ogaan waxa dhici doona ka hor.
5. Baro Sida loo Unroot
Sida aan kor ku soo sheegnay, waa fursad laga yaabo in aad ku guuldareysato inay ka rujin iyo wax walba waa la waayayaa. Waa inaad cad sida loo unroot. Haddii ay dhacday, aad unroot kartaa telefoonka Android ama kiniin ah si ay u tagaan si caadi ah dib.
Qaybta 2. 1 Click to Root Android Phone / Tablet ka Computer la MobileGo
Waxaa ka mid ah in badan oo qalab xidid, Wondershare MobileGo taagan ay sabab u tahay hawlgalka fududeeyay. Just mid click, telefoonka Android ama kiniin jiri doona xididkii si ammaan ah. Ka sokow, waxa ay si buuxda u la jaan qaada in ka badan 3,000 oo qalabka Android socda Android 2.2 iyo ka dib. Hoos waxaa ku tutorial sahlan ku saabsan sida loo rujin phone Android ama kiniin. Raac waxa.
Tallaabada 1. Download iyo Run MobileGo on Computer
Si aan ku bilaabo, dejisan iyo ordi MobileGo on computer Window aad. Waxa maamula.
Tallaabada 2. Isku Phone Your Android ama Tablet si Computer via Cable USB ama WiFi
Connect via cable USB: bareesada cable USB ah oo wuxuu galay in computer si aad u hesho telefoonka Android ama kiniin ku xiran. Marka la aqoonsan yahay, telefoonka Android ama kiniin ku tusi doonaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Connect via WiFi: Si aad xiriir WiFi ah, waa in aad hubiso in aad ku rakibtay file waa-leeyihiin MobileGo.apk ku saabsan telefoonka Android ama kiniin sameeyo. Haddii aan, rakibi file MobileGo.apk gacanta . Markaas, u furan app MobileGo ah ee aad taleefan Android ama kiniin ah oo ay u isticmaalan in iskaan Code QR ku MobileGo desktop-ka si ay u xiriiriso.
Tallaabada 3. Start in Root Android Phone ama Tablet
In galeeysid bidix, guji Qalabka . Daaqadda Qalabka ah, guji Hel Root Access . MobileGo bilaabo inuu ka rujin telefoonka Android ama kiniin. In habka rooting ah, aad telefoonka Android ama kiniin la xiran.
Ka sokow MobileGo Wondershare, hanad Root sidoo kale waa aalad awood leh oo si sahlan loo isticmaalo xidid Android. Waa lacag la'aan ah iyo ka ay si rasmi ah waxaad si fudud u soo bixi kartaa. Ma aha in aad si ay u rakibi. Just u ordaan oo ay u isticmaalaan in ay ka rujin aad Android ama kiniin la click hal. Ka dib markii ay soo afjarno, aad awood u iftiimiyo ROM caado iyo saaro barnaamijyadooda dhisay-in ay sii daayaan meel xusuusta. Hadda, raac tallaabooyinka fudud ee hoose si aad u bilowdo safar farxad rujin telefoonka Android ama kiniin.
Tallaabada 1. Isku Phone Your Android ama Tablet si Computer by Isticmaalka Cable USB ah
Si aan ku bilaabo, hanad download Root ka ay si rasmi ah. Waxay u ordaan oo isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama kiniin in computer. Markaas, hanad Root toos ah lagu ogaan doonaa oo la aqoonsado telefoonka Android ama kiniin.
Ay ku guuldareysato inay ku xirmaan? Hubi in aad karti debugging USB ah ee aad taleefan Android ama kiniin. Markaas, riix Next si aad u hesho telefoonka Android ama kiniin ku xiran.
Tallaabada 2. Start soo afjarno Phone Your Android ama Tablet
In uu furmo suuqa hoose, u tag geeska hoose ee saxda ah iyo sax waan aqbalayaa . Markaas, guji u Root . In habka rooting ah, HA barkinta telefoonka Android ama kiniin.
Halmaamay in gurmad aad telefoon Android ama kiniin ah ka hor soo afjarno, hadda wax walba waa la waayayaa? Lumay xogta inta ay socoto rooting ah? Ha welwelin. Akhri qodobada soo socda si ay u helaan iyada oo loo marayo.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Android
Sidee inuu ka soo kabsado Messages ka Android Phone
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Faylal ay ka Android